Ihunanya abughi ihe ikwuru. Ihunanya bu ihe I n’eme. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ihunanya abughi ihe ikwuru. Ihunanya bu ihe I n’eme. - Amaghi ama
Lovehụnanya bụ otu n'ime mmetụta kachasị anwansi nke mmadụ hụtụrụla. Hụ ọdịnaya n'anya ihe niile achọrọ iji gwọọ mmadụ n'ime. Ezi ịhụnanya ebighebi abụghị naanị ngọzi kamakwa onyinye ebighi ebi sitere n’eluigwe.
E kwesịrị ịzụlite ezi ịhụnanya o nyekwara oge iji tozuo ma gbasaa. Enweghi ike zoo ezi ihunanya dika ihe anyi choro. Ezochiri ezi ịhụnanya n’ezie n’omume anyị. Ndị hụrụ onwe ha n'anya kwesịrị ịgbalị ịghọta ibe ha nke ọma.
Ọ bụghị naanị nke a ga - emechi mmekọrịta dị mma kamakwa ọ ga - enyere anyị aka ịmara ibe anyị nke ọma. Hụnanya n’enweghi nchekasị, ọ bụrụ na a zụlite ya n’ụdị ezi ya, bụ otu n’ime ihe kachasị baa uru mmadụ ga-enweta na ndụ ya.
Ọ dịghị akụ na ụba nke ụwa a nwere ike ịzụta ịhụnanya na-enweghị nchịkwa. A na-ezobe ezi ịhụnanya ọ bụrụgodị na obere ihe nke mmadụ na-emere onye ọ na-elekọta. Nke a nwere ike iburu onye ị hụrụ n'anya ịzụ ahịa otu ugboro n'izu ụka ma ọ bụ zụta ya ụfọdụ ifuru.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na ịhụ ihe onwunwe n'anya nke ihe ndị a, anyị na-achọpụta na ndị a pere mpe ma bụrụ ndị na-adịghị mkpa. Agbanyeghị na inyocha okwu a nke ọma wee nyochaa mmetụta ya, anyị nwere ike ịchọpụta na obere ọrụ ndị a bụ n'ezie ihe kachasị mkpa.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-anụ banyere ọtụtụ nkwa na ikwu mgbe anyị gwara mmadụ ka ọ gosipụta ịhụnanya ha maka anyị. Ọ bụrụ na anyị ji nlezianya na-elezi anya, anyị ga-achọpụta na ndị hụrụ anyị n'anya n'eziokwu na-ekwu na ha anaghị emekwu nke ọma maka ibi ndụ anyị. Nke a bụ ihe enweghị atụ. Mmetụta ezi sitere n’ezi obi bụ ọgwụgwọ n’ezie.
Ihe atụ zuru oke banyere nke a bụ nne anyị. Ndị nne anyị na-anọ n'akụkụ anyị mgbe niile ma na-enyere anyị aka n'ihe niile n'ekwughị okwu ọ bụla. Shouldhụnanya kwesịrị ịbụ ihe ngosipụta nke omume ọ bughi kwa okwu. Enwere ike ịkọwa ịhụnanya n'ezie na obere omume nke anyị nke na-egosipụta ya n'eziokwu.
Echi anaghị ekwe nkwa echi, yabụ taa a chọrọ m ka ndị enyi m niile na ndị ezinụlọ m mata etu m si nwee ekele na gị niile nọ na ndụ m. - Amaghi ama
Echi anaghị ekwe nkwa echi, yabụ taa achọrọ m ka ndị enyi m na ndị ezinụlọ m mara nke m na-ekele…
Ebe kacha njọ n’agbata mmadụ abụọ bụ nghọtahie. - Amaghi ama
Agaghị agbakọ oghere dịkarịsịrị n'etiti mmadụ abụọ na kilomita, mana ọ bụ nghọtahie ahụ na-adọta abụọ…
Nwee nchekwube. Maghị ihe echi nwere ike iweta. - Amaghi ama
Na-enwe olile anya mgbe niile. I kwesịghị ịbụ onye nkụda mmụọ. Cheta na obughi onye ozo…